तपाईं trolls खुवाउन हुँदैन | Apg29
Trolls त त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई कहिल्यै खुë
त्यसैले त्यहाँ आफ्नो व्यवहार पछि एक एजेन्डा छ। त्यसैले म जादू छ शक मानिसहरू को कहिल्यै टिप्पणी व्यवहार गर्छन्। म तिनीहरूलाई त कुनै खाना दिन्छ।
एक "जादू" के हो?
इन्टरनेटमा एक ट्रोल मात्र नाश गर्ने र टिप्पणीमा भाँचिएको वस्तुहरू छलफल गर्न चाहने एक व्यक्ति छ। तपाईं यस्तो उद्देश्यको भएका मान्छे प्रतिक्रिया सक्दैन।
म ब्लग सुरु गर्दा Apg29 त्यसैले केही मसीहीहरू यी trolls प्रतिक्रिया प्रयास गर्नुभयो, तर एक समय पछि उनि थिएनन्। यो मानिसहरूको समय लाग्न र तिनीहरू दिने अन्त भनेर तिनीहरूलाई नथाक्न, भूतप्रेत उद्देश्य छ।
Trolls तिनीहरूले धम्काउन र हामीलाई चूप गर्न चाहनुहुन्छ, एक समय चोर छ। त्यसैले त्यहाँ आफ्नो व्यवहार पछि एक एजेन्डा छ। त्यसैले म जादू छ शक मानिसहरू को कहिल्यै टिप्पणी व्यवहार गर्छन्। म तिनीहरूलाई त कुनै खाना दिन्छ।
यो मानिसहरूको समय लाग्न र तिनीहरू दिने अन्त भनेर तिनीहरूलाई नथाक्न, भूतप्रेत उद्देश्य छ।
तर्क गर्न सक्दैन
यो सामान्यतया उद्देश्य व्यक्ति विरुद्ध तर्क ट्रोल को हार बिना सहमति सिर्जना गर्न छैन किनभने एक ट्रोल व्यवहार छ जो कसैले संग तर्क छैन।
जब म टिप्पणी लागि तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन छलफल ऊंची उडान भरना हुनेछ भनेर अरूलाई पोषण गर्नुपर्छ सामान्यतया म यस्तो टिप्पणी deletar। असाधारण अवस्थामा, म कहाँ उहाँले भन्नुभयो छाल र पाठ्यक्रम को ट्रयाक, सधैं बाहिर हेर्न यस्तो टिप्पणी मार्फत जारी छ।
एक ट्रोल उदाहरण
एक यस्तो उदाहरण लेख केही टिप्पणीहरू छ म नयाँ वर्षको लागि लेखेका "हेर्नुहोस्, म केही नयाँ गरिरहेको छु।" म सीधा deletat पहिलो टिप्पणी छ तर त्यसो नगर्ने छनौट गर्नुपर्छ। र त यो trolls इन्धन दिंदा यो चलनअनुसारको छ रूपमा विकास गरे।
टिप्पणीहरू derailed र सन्देश आइपुगे भनेर लेखको विषय चोरेछ। यो बेकारी टिप्पणी धेरै संग लेख सन्देश नाश गर्न लुटेरा उद्देश्य छ। म टिप्पणी के तपाईं "कली मा" छैन प्रतिरोध भने सिधै यो जस्तै कसरी पागल हुन सक्छ देखाउन खडा गरौं। तपाईं trolls कहिल्यै खुवाउन पर्छ।
एक ट्रोल इमेल
कि लेखको टिप्पणी उदाहरण रूपमा कहिलेकाहीं हुन सक्छ रूपमा भयानक छैन। तर म एउटा उदाहरण दिन छौँ: म ​​एक व्यक्ति एक मसीही हुन दावी देखि एक इमेल पायो र रूपमा arrogantly बाइबल को आफ्नो महान् ज्ञान मा blows। ठ्याक्कै त्यसैले यो व्यक्ति यस्तो लेखे:
"म वर्ष मा APG29 देखि एक समाचारपत्र प्राप्त गरेका छैनन्। इस्राएलका परमेश्वरले Småland र सबै seeming मसीहीहरूले धर त्यहाँ नष्ट सकौं।"
निस्सन्देह, म मेल जवाफ थिएन यो पूर्ण बेकारी छ रूपमा। म त केवल अझ ई-मेलहरू पायो थियो र त म समय र मन परिवर्तन गर्न गर्दैन जो एक व्यक्ति प्रयास गुमाए।
म यस्तो इमेल र टिप्पणीहरू मेरो समय लाग्न भनेर मेरो ब्लगिंग मा प्रारम्भिक सिके। तपाईं trolls खुवाउन हुँदैन! बरु, तपाईं कुरा यस प्रकारको तिनीहरूले येशू ख्रीष्टको पश्चात्ताप गर्न र सुरक्षित हुन आवश्यक भन्ने महसुस हुन सक्छ भनेर trolls अन्ततः starved पाइहाल्छन् भनेर छोड्न गर्नुपर्छ!
Apg29 उद्देश्य तिनीहरूले उहाँलाई प्राप्त गर्न र सुरक्षित हुन सक्नेछन् भनेर मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रदान गर्न छ। केही यो रोक्न सक्नुहुन्छ। Trolls त त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई कहिल्यै खुवाउन गर्नुपर्छ सुरक्षित हुनबाट मान्छे रोक्न चाहन्छु।
न त म चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरू भएका मान्छे देखि इमेल वा टिप्पणी गर्न जवाफ गर्छन्। तिनीहरूले इमानदार प्रश्न छ किनभने तिनीहरूले जवाफ देख छैन, तर केवल प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईं प्रश्न मात्र सही एक प्राप्त हुनेछ जस्तै इमेल वा टिप्पणीहरूमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र त्यसपछि अर्को र त्यसपछि अर्को ... को trolls खुवाउन नगर्नुहोस्!
को trolls खुवाउन छैन
9 संकेत तपाईं इन्टरनेट ट्रोल मा भेट कि